China hatsiaka nanakodia forming fampiasana milina eo amin'ny fiainana mpanamboatra sy ny mpamatsy | Zhongtuo
Rehefa tonga ny tenin'ny mangatsiaka Rolling namorona milina, ny ankamaroan'ny olona dia tsy tsara. Fa rehefa tonga ny fanorenana ny trano, ao amin'ny isan-andro tsy mahazo misaraka izany. Raiso ny Brazile tetikasa ho ohatra mba hampisehoana, ny fomba imporant ny hatsiaka Rolling namorona milina ireo.
Brezila dia manana tanteraka ny faritra tany 8.547.400 kilometatra toradroa (46% -n'ny ny faritra Amerika Atsimo), ambony fahadimy eto amin'izao tontolo izao; amin'ny mponina 202 tapitrisa, dia kosa ilay firenena ao Amerika Latina. Brezila vy tahirin laharana fahadimy eto amin'izao tontolo izao, ary izao tontolo izao no faharoa lehibe indrindra mpanondrana vy. Ny famokarana bauxite no faharoa ihany Aostralia, miaraka amin'ny hery anaty orinasa matanjaka. Ny harena an-kibon'ny toy ny oraniôma, manganese sy ny nikela mety be koa boloky hazo. Dranomamy loharano kaonty nandritra ny 12% ny harena eran-dranomamy. Brezila no lehibe indrindra eran-kafe mpamokatra sy mpanondrana ary dia fantatra ho toy ny "kafe fanjakana". Brezila ihany koa izao tontolo izao lehibe indrindra mpamokatra sy mpanondrana siramamy, ny faharoa lehibe indrindra mpamokatra sy mpanondrana soybean, ary ny fahatelo lehibe indrindra mpamokatra vary. Corn fanondranana ambony laharana eo amin'ny dimy eo amin'izao tontolo izao sy izao tontolo izao lehibe indrindra mpanondrana ny henan'omby sy ny akoho.
Fa amin'ny ankamaroan'ny Shinoa cognition, Brezila dia firenena ny safo-zava-mahadomelina, matetika fandrobana, ary tena mpanao kolikoly ny governemanta.
Ny alin'ny 2 Septambra, 2018, nisy afo nipoaka tao amin'ny National Museum ao Brezila any Rio, ary ny afo izay naharitra ny alina rava 20 tapitrisa rakitra. Ny antony voalohany dia hoe afo ny tranombakoka dia namelatra ny vola lany, ny trano Simba ny tany, ary ny tranom-bakoka ao flammable zavatra simika, fa nanana rafitra fiarovana afo. Fa raha ny marina, ny loza io 200 taona portogey tantara trano dia indrindra mazava tsara ny fanamarihana ambany pejy ao amin'ny firenena Nisandratra: korontana ara-politika, ara-toekarena fahalemena, Brezila dia mafy harena saingy tsy afaka manala ny " afovoany fandrika fidiram-bola ", na dia ao amin'ny filaharana ara-toekarena maneran-A santionany ny firenena izay mandeha foana downhill.
Mazava ho azy, ny vaovao etsy ambony dia tsy misy ifandraisany amin'ny lahatsoratra ity. Ankehitriny, amin'ny alalan'ny fanehoana an-toerana homestay kely (na ny fizahan-tany ala nenina) tetikasa, maka jereo kely ny leoparda, ka jereo ny fampiharana ny mazava vy any Brezila.
Post fotoana: Nov-07-2018
Stud Track Machine, Metal Deck fiforonana milina , Tafo Sheet Tile Making Machine, Hg50 Tube-dalana,, Dingana Tile Ny fanaovantsika Machine , Rolling Shutter Door Roll milina fanaovana fiforonana ,